Mason waxay isu keenaan dadka doonaya inay ilaaliyaan adduunkeenna.
Ka soo horjeedka fikradaha shirqoolka waxaan ku dhaqaaqnay iyada oo aan daboolin Morocco. Astaamaha Masonic-ga waxaa burburiyey ama ku rinjiyeeyay militariga Marooko markii la baabi'iyay xusuustii Holocaust. Calaamad muujinaysa dagaalka ka dhanka ah aragtiyaha shirqoolka ayaa aad muhiim u ah.
Pro7 Galileo: Dukumentiyada ku saabsan Freemasons oo leh aasaasaha PixelHELPER ee Oliver Bienkowski
Bax oo is caddee
Adoo u doodaya sharafta aadanaha iyo kobcinta walaaltinimada iyo jimicsi wanaag, Freemasons waxay raadinayaan inay xaqiijiyaan himilooyinka aadanaha. Freemasons ma ahan Illuminati, ha aaminin wax aragti maleeg ah oo internetka ah oo ku saabsan Amarka Cusub ee Adduunka, Freemasons wax shaqo ah kuma lahan taas midkoodna. Sanduuqyada haweenku sidoo kale waxay si rasmi ah u jireen ilaa 1935. Sidee ayey u weynayd rabitaanka dumarka ee qarnigii 18aad inay sameeyaan wax la mid ah ragga waxaa muujiyey riwaayado taxane ah oo ka socda muddadan oo ka hadlaya mawduucan; Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, Magic Flute by Freemason Mozart. Freemason waa kuwa dulqaad badan oo u istaaga dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
Mid ahaan Qaabka aasaaska waxaan dammaanad qaadi karnaa shaqo muhiim ah waayo, xuquuqda aadanaha & dheeraad ah aadanaha sidoo kale ku saabsan jiilalka soo socda ka fog. Marka PixelHELPER Foundation non-profit GmbH nasiibku wuxuu ku dhacaa "Society Relief Society”(FHW). Waa kan hay'ad samafal ka freemason gudaha Jarmalka. The masonic Xubnaha Gargaare pixel mar labaad dooneysaa sida Waqtiyo ka Kacaankii Faransiiska, naftaada si firfircoon ula dagaallama caddaalad darrada meeshuu ka muuqdo. Tan iyo Qarniyo kaqeybgal freemason wanaagga ku saabsan Welt oo isku day adiga Xeer anderen Moodal Doorka noqon. The freemason shaqeeyay ilaa 1980 naftaada isbitaalka in Hamburg oo ilaa maanta shaqeynaya Hawlgab guri ee der Magaalada Hanseatic.
PixelHELPER, waa urur caalami ah oo aan macaash doon ahayn oo loogu talagalay dadka laga tirada badan yahay & xuquuqda aadanaha oo ay dhiirrigeliso fikradaha Freemasons. Nasiib darro qaylada adduunka, waxaan tageynaa wadadayada, daganaansho iyo ammaan, cabsi la'aan halis ah, ujeedooyin sare oo maskaxeed si loo ilaaliyo dhulka. Caqiidada aasaasiga ah waa in mabaadiida kacaanka Faransiiska "Xoriyadda, sinaanta dimoqraadiyadda" loo baahday in lala dagaallamo soo noqnoqoshada dan la’aanta siyaasadeed. Run u halkudhig ah: "Is ogow naftaada!" xubnuhu waxay isku dayaan inay isku xirxiraan silsilad aadanaha oo adduunka oo dhan ah.
Ka soo qaad jariirada Freemason ee Jarmalka "Humanität"
PixelHELPER waxaa aasaasay 2011-kii fanaanka nalka & Freemason Oliver Bienkowski oo ay weheliyaan inka badan 70 asxaab, oo ay ku jiraan 6 kale Freemason. Freemasonry waa isbahaysi saaxiibtinimo, isbahaysi anshax ku dhisan, jaaliyad bilow ah iyo isbahaysi shaqo oo astaan ​​u ah kana soo jeeda dhaqankii Iftiiminta Yurub. Iyada oo ay ku fadhido qiimaheeda aadanaha, walaaltinimada, xorriyadda, caddaaladda, jacaylka nabadda iyo dulqaadka, waxay siisaa hanuuninta iyo heerarka fikradaha iyo ficillada xubnaheeda.
Freemasons waxay maamushaa isbitaalada iyo guryaha dadka da'da ah Jarmalka
Isbitaalka Freemason wuxuu albaabada u furay Oktoobar 3, 1795 magaalada Dammtorwall oo ah machadkii ugu horreeyay ee qaabila dadka jiran, wax walboo ka maqnaa Hamburg ilaa waqtigaas. Waxaa markii hore loo sameeyay isbitaal loogu tala galay dumarka addoomada ah waxaana la balaariyay dhowr sano kadib ragga adeegayaasha ah. Qorshaynta waxaa fuliyay Friedrich Ludwig Schröder oo gacan ka helaysa walaalaha von Ax Absalom ee saddexda shabag, Dr. Bedtmann, Dr. Ku shub Ferdinande Caroline saddexda xiddigood iyo Cords St. Georg oo ah cagaarka cagaaran.
Waqtigaas, United 4 Hamburg ayaa ku hoyday (Abshir ilaa 3 shabaqa, St. Georg ilaa isha cagaaran, Emanuel ilaa Maienblume iyo Ferdinande Caroline ilaa seddexda xiddig) ayaa jiray, kuwaas oo kaliya ka dib heshiis ku saabsan bixinta qeyb ka mid ah hantida loo maleynayo inay iyagu leeyihiin. Sanadkii 1799 qolkii 'Ferdinand zum Felsen' ayaa ku soo biirey. Ciyaartii ugu dambeysay, ururka dhaqaalaha 'United 5 Hamburg Lodges' wuxuu jiray illaa sannadkan. Maamulka hantidooda wadareed wuxuu ku jiray gacanta 'Hanti Dhowrka iyo sadaqada Comité der Ver. 5 sanduuq '. Guddigan, oo uu madax u yahay, Brey (Ferdinande Caroline ilaa seddexda xiddig), waxay go’aansadeen inay dib u dhisaan cusbitaalka 1883 waxayna bixiyeen qaabkii loogu talagalay tan guriga cusub ee Kleinen Schäferkamp oo leh 06.10.1885 sariirood oo horeyba loo isticmaali karo Oktoobar 80, XNUMX kari karay.
Ku soo sheeg meesha maaruun
"Waxaan jeclaan lahaa in fikradaha ay matalayaan Masons ay noqon doonaan kuwo aad u ballaaran bulshada. Maanta waxaan u baahan nahay dulqaad badan iyo dabeecad aadane ah oo bulshada ka dhigaya mid aad u bini'aadam. "
ayaa sheegay in Ignaz Bubis
Maxay tahay Freemasonry?
Miisaaniyaddu ma aha mid aan ikhtiyaar lahayn, ma ahan mid aan la isticmaali karin, laakiin wax loo baahan yahay, oo lagu aasaasay nooca bani-aadamka iyo bulshada dhexdeeda.
Ujeedada Ururka Masonic waa inuu ku barto xubnihiisa aadanaha dhabta ah. Macnaha tan waxaa weeye ku dhaqanka caadooyinka astaamaha ah ee lagala wareegay buulshaha dhismayaasha qarniyadii dhexe, tilmaam wadaagga ah oo ku saabsan arrimaha muhiimka ah ee aadanaha, beeritaanka himilada iyo kicinta saaxiibtinimada dhabta ah iyo jacaylka walaaltinimo. Qof kastaa waa inuu ku faafiyaa mabaadi'daas meel ka baxsan hoyga, kor u qaadista iftiinka sida ugu fiican ee uu kari karo, iyo dulqaad la'aanta. Gudaha hoyga, xubnaha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay is-bartaan iyagoo la kulmaya astaamo iyo dhaqanno wadajir ah.
Maydadka ee GDR
ORF: Dukumiinti ku saabsan Meelaha
PixelHELPER Foundation | Soo bandhigida nooca bani'aadamnimada ee gargaarka bini'aadminnimo ee TedX, Morocco Marrakech
Joomatariga rakibaadda iftiinka Masonic, Dusseldorf Jarmalka
Rakibaadda laser Rainbow "Laga soo bilaabo qaanso roobaad", Düsseldorf Jarmalka
Founder of PixelHELPER la kulmay Otmar Alt
PixelHELPER Foundation | Kulanka aasaasiga PixelHELPER Oliver Bienkowski oo leh Otmar Alt mid ka mid ah fannaaniinta casriga ee ugu caansan Masonic
Booqo matxafka Masaajidka
PixelHELPER Foundation | Booqo Matxafka Masonic ee Bayreuth
Nuxurka Masonic Confederation
Nuxurka of Federal jooggo waa midnimada fikrad sare, taageerada wehelnimada siweyn looga iyo waayo-aragnimo vertiefendem calaamad. Xubnaha axdiga anshaxa, Freemasons waxay u doodaan bini'aadan, walaaltinimo, dulqaadka, jacaylka nabadda iyo cadaalada bulshada. Bulsho ahaan dadka walaalaha ah ee isku xiran, hoyga ayaa ah goobta tababarka ee qiyamkaas. Miisaaniyadu waxay u adeegtaa sidii midnimo siman oo ka mid ah fikrada iyo bulshada. Tani waa ujeedooyinkooda ku saabsan dhammaan ururrada kale ee leh ujeedooyinka la xiriira.
Mar walba had iyo jeer su'aasha cusub iyo marwalba marwalba: Waa maxay Freemasonry? Waa muhiim inaad fahamto Confederacy Masonic ah sida midnimada fikradda, bulshada iyo calaamadaha muuqaalka. Dabeecaddan cusub ee ballanqaadku wuxuu u oggolaanayaa in bani-aadamku uu fursado kala duwan helayo. Sidaa daraadeed, mid ayaa soo jiidan kara muranka ruuxiga ah, halka kuwa kalena ay arki karaan muhiimada beesha aadanaha ee hoyga, iyo seddexaad, calaamadaha iyo caadooyinka, waxay la kulmi karaan bartamaha axdiga. Ku qanacsanaan la'aanta macaamiilka waxaa lagu ogaadaa oo keliya marka ay dhexmarto dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay.
Aasaasaha PixelHELPER ee Hessenquiz
Freemasons ogahay in qiimaha oo ay ka qirtaan, si joogta ah ka dhigay firfircoon, si goan in view of khatarta jira oo waa in la ogaaday in dadaalka abid-cusub. Xidhiidhka Masonic wuxuu ka hortagaa samaynta barnaamijyada siyaasadeed mana ka qaybgeli khilaafaadka xisbi-siyaasadeed. Taa baddalkeeda, hudheeladu waa inay noqdaan meelo talaabo shakhsiyeed oo mas'uuliyad gaar ah loo diyaariyo iyada oo loo marayo macluumaadka iyo isku dhafka wadajirka Your weli hawsha ugu muhiimsan ee wax Nuurin la'aantiis kulmi Freemasons ah by gudbo nacaybka, by horumarinta dareen in saacado arrimaha iyo dadaalka loogu jiro in la helo search caadi ah in runta.
Mason waxay ogtahay in nolol macquul ah ee shakhsiyaadka iyo kooxaha bulshadu u baahan yihiin laba waxyaabood: si aad u ogaato aduunka oo uu ku nool yahay oo uu qiimeeyo ficil tallaabo. Qolofiyadu waa inay bixiyaan jihayn xagga warfaafinta iyo isku dhafka wadajir. Xaqiiqada dhabta ah ee niyadda aadanaha, dareenka, dulqaadka, jacaylka nabadda iyo cadaalada bulshada dhexdeeda ayaa isku mar noqon kara shuruudaha go'aan qaadashada.
Waa run in Mason aanay garanaynin sida dunida adduunku u eegto faahfaahin sababtoo ah waxay iska ilaaliyaan in ay dejiyaan nidaamka siyaasadeed ee siyaasadeed. Si kastaba ha noqotee, fikradaha bani-aadmiga iyo dulqaadka waxay siinayaan awood ay ku ogaan karaan hanjabaad iyo in ay si xushmad leh u dhaqmaan.
Wareysiga TV DW.DE, aasaasaha PixelHELPER Oliver Bienkowski, Deutsche Welle TV, Berlin Germany
Tag Cloud: Century 300 years Freemasonry Afghanistan Aha Museum Action Star Trek Antoine Leiris bandhiga Avantgarde bamberg Bauhaus Bayreuth Charity Concert Berlin bielefeld Bihac Bosnia Brandenburg Bremen Walaalaha Walaalaha Buugga Buugga Walaalaha ee Xafiiska Burkhard Sunday burnout Burns Supper Carl ilaa Eintracht Chanson Dryt Dematst. Franz Reinschauer Frauenhaus Bandhigga Xorriyadda Masonic Freemason Freemasonry Freemasonisches Hilfswerk Saaxiibtinimada Friederike ilaa Caloolinnimada Fürth Georg ilaa Dahabka Unicorn Georg ee loo yaqaan 'Unitorn Grant Gerd Scherm Society Glocke lugta Alb Glocke ee lugta Alb Goche Golf. Dhamaadka golf Aabo Awoowe Großlogentag Grandmaster kulanka Grandmaster Gummersbach High School hall Hamburg Hanover Hans-Hermann Höhmann Hoya Matxafka Holand Heinrich Albert Oppermann Helmut Reinalter wuxuu soo booqdaa Hoya Humanism Gargaarka Banii-adamnimada Aadanaha Höhmann dhanka iimaanka Feast Isis iyo Osiris sanadka cusub Jens Oberheight Johnn Beck Johann Bert Johntst Justus Erich Bollmann kabarett kestner-matxafka kinderdorf carruurta ee xarumaha carruurta lagu hayo carruurta guddiga klaus jürgen cagaaran ee kollooliyamka abaalmarinta dhaqanka freemason kurp falz Leipzig yareynta Lubnaan illaa saddexda geedaha kedarka ah ee Lichteinbringung lge logen logenbasar hoyge Lortzing house Lothar Stitz Ludwigshafen Lübeck mannheim Masonicum Matinee michelstadt Minerva ilaa saddexda geed timireed Muusikada Mühlheim Munich Munster Sannadka cusub ee soo-dhoweyntka la leeyahay Nortertengergerger Pforzheim Planert siyaasada Potsdam pottkinder punch mile Quatuor Coronati Sifeeyaha Diinta Reuchlin Roland Rolf Appel Rotary Rumania silencer U dir serbien sinn dareen la'aan Bandhig gaar ah Freemasonry Tabarucaad St. Alban to Stention Fire Stade Star of Sanssouci Raadinta Calaamadaha maalinta furitaanka ee Talkamp Workchk Twinklk Valechlk Slandkladk Wadada loo maro wadada Lyonesse Suuqa Kirismaska ​​ee Walaalaha Werner Brix Westphalian Peace Wetzlar Wiesbaden wildeshausen Wilhelm Busch Wilhelm zu den drei Helmen Wilhelm ilaa seddexda tiir Wolfenbüttel Wolfenbütteler Heimatstiftung zauberflöte Waqtiga wareejinta Saddexda xiddigood waxay u midoobeen saddexda webi Zum dahaben Rade Zur Alten Linde Zur Hansa ilaa waagu baryada ee daacadnimada Zur oberbergischen aaminnimada To daacadnimadii ka jirtay regnitz walaalnimada runta iyo xiriirka saaxiibtinimada adduunka.
Mason waxay isu keenaan dadka doonaya inay ilaaliyaan adduunkeenna. Febraayo 2, 2021Oliver Bienkowski